Pimp Blog gị | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 26, 2006 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Gingde blọgụ dị nnọọ unyi. Emechara m gafee blog (Agaghị m ekwupụta nke), nke ahụ nwere ọkọlọtọ na-ekwu na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka post gị. M pịrị na mgbe m gụsịrị nkọwa nke ọrụ ahụ, aghaghị m ikweta na echere m na m nwere ntụpọ. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ blọọgụ, nke ọma na nke ọjọọ, echeghị m na m ga-ahụ ụbọchị mmadụ ga-akwụ ụgwọ naanị iji tinye ọkwa dabere na ihe ndị mgbasa ozi chọrọ. Adabaghị m… ọ bụ ebe a:
Otu njirimara na-enye ume ọhụrụ nke blọọgụ bụ na ha anaghị ere ahịa… enwerekarị usoro doro anya n'etiti ọdịnaya na mgbasa ozi. Enweghị ohere dịpụrụ adịpụ nke ọdịmma n'ihi na ndị mgbasa ozi anaghị eso ndị na-ede blọgụ arụ ọrụ. Ọrụ mgbasa ozi nke etiti na-arụkarị ọrụ niile na-enweghị aha. Ọrụ ndị dị ka PayPerPost ga-eme ka ahịrị ahụ ghara ịma.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji tinye aha na aha gị dị ka nke a? Dị ka onye nta akụkọ nke onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwụ ụgwọ, ị ga-ebibi aha ọma gị site n'ire onwe gị otu a. Emela ya. Ọ bụghị kwesịrị ya!